Abakhiqizi bohlelo lokuphunyuka oluphuthumayo beLuminescent - Abaphakeli ne-Factory iChina Luminescent
I-Aluminium antislip ekhanya emigqeni yesitebhisi esimnyama Umklamo wethu osanda kwenziwa futhi okhiqizwe imichilo ye-Aluminium antislip ingakhanya ebumnyameni ngemuva kokukhanyisa ukukhanya, iphephile, iyamangalisa futhi ikuqondise endaweni ephephile Izici ezihlukile ze-aluminium L zokuma kwesisekelo se-aluminium ngohlangothi lwe-bevel . Ingaphezulu le-rough lifakwe ngemichilo ye-carborundum grit strips KANYE nobukhazikhazi obukhanyayo, Okungagungqi futhi kukhanya ebumnyameni Kufakwe ngaphakathi noma ngaphandle kwezakhiwo uma kuphela umhlanganisi ...
i-luminescent stair noses ekhanyayo yesitebhisi handrail Ukukhiqizwa okwenziwe ngokwezifiso, izinto ongazisebenzisa, ilungele ngokuphelele iphrojekthi yakho ekhanyisayo Uma kwenzeka kuphuthuma noma ukwehluleka kwamandla kungazelelwe, i-stra handrail futhi ingasho indlela yokuphila yokuphunyuka. Kunganikeza umhlobiso omuhle kakhulu wezitebhisi, kusize abahamba ngezinyawo, ukuvikela asebekhulile, ababuthakathaka, abagulayo nabasha; ilungele kakhulu imigwaqo yasesibhedlela kanye nezitebhisi. Ungahlobisa izitebhisi, udlale muhle futhi ungokoqobo Kufanelekile kuma-hos ...
Imicu emide ye-anti-skid ende ye-Afterglow yakhelwe ngokukhethekile futhi yenzelwe wena. Umkhiqizo awudlali kuphela umsebenzi ojwayelekile wokulwa ne-skid nokuhlobisa, kepha futhi ukhombisa indlela yokusinda esimweni esiphuthumayo. Inqubo yokukhiqiza isithuthukile, ukuvikela imvelo, ukungabangi umlilo ne-antiskid, kanti nendawo yopende ihlala isikhathi eside futhi ayiwa. Hlangana nezidingo zekhwalithi ezifanele.
Izimpawu zeLuminescent zikhanyisela indlela eya ephepheni
Isiteyidi sokufuduka kwesikhanyisi esisezingeni eliphansi esisifakiwe / ilambuines Luminescent glaze yokuphunyuka okuphuthumayo
I-Ceramic tile ekhanyayo ingumkhiqizo okhanyayo ongasetshenziswa njengezimpawu zokuphepha kanye nemihlobiso yesakhiwo. Ukusetshenziswa kwendawo ehlukile kungaba odongeni, phansi, izitebhisi kanye nomsebenzi wobuciko egalari. Iningi le-ceramic yethu ekhanyayo nayo ilungele ukwakha okwayihlanganisa inqubo yendabuko yokusebenza nobuchwepheshe besimanje. Babonisa umphumela wokukhanya okungapheli, i-antiseptic, okuhlala isikhathi eside, nokuqina kwamakhemikhali. Ngemuva kokumunca ukukhanya okuthile okubonakalayo njengokukhanya kwelanga okuqondile imizuzu engaba ngu-30, bese ukhazimula ngokuzenzakalela amahora angama-8 ~ 12hours. imikhiqizo ayisiyo njongo yomhlobiso kuphela kepha icubungula nokuphepha.
1, I-tile eyodwa ekhazimulayo ye-Ceramic
2, I-Basso-relievo enengxube yesithombe esikhazimulayo
3, Ingxube ekhazimulayo ye-ceramic tile
4, Isibonakaliso sokuphuma sodonga noma phansi esitshelwe
Izici kanye nokusebenza kwama-Photo Luminescent Ceramics Tiles
I-1） Izithombe ze-luminescent ceramics Tiles zikhiqizwa ngokungeza umbala we-luminescent pigment inqubo yokukhiqiza ye-ceramics eyejwayelekile nengilazi. Uma kuqhathaniswa nobumba kanye nengilazi ejwayelekile, imikhiqizo ingakhanya ebumnyameni ngemuva kokungenisa amalambu abonakalayo, okwenza ama-ceramics nengilazi asetshenziswe kabanzi.
2) Okuqukethwe kwesithombe se-luminescent ceramics kungadonsa izibani ezahlukahlukene ezibonakalayo kuze kufinyelele lapho kugcwele khona, bese kukhanya ebumnyameni njalo, ukusetshenziswa okungenamkhawulo kokusebenzisa isikhathi eside ngemuva kokukhanya, amalambu aphezulu, okuphindwe kayishumi ngokukhazimula kwendabuko yendabuko. Izinto ezibonakalayo azinawo umsakazo, zingenangozi futhi azinabungozi.
4) Ukusetshenziswa kwezithombe zobumba zezithombe ezindlini ezifuywayo nasezakhiweni zomphakathi ngeke kuhlobise futhi kube ubuhle izindlu nendawo yokusebenza, kodwa futhi kungaletha izinto eziningi ezakhamuzini ngokukhanya kwazo ebumnyameni.
I-5) Ama-ceramics wesithombe se-luminescent angakhipha i-wave ethile yokukhanya yobude, enganqanda izinhlobo ezithile zezikhutha nezifo. Lesi sici sihlangabezana nombono ophilayo wemfashini futhi onempilo kubantu besimanje ngokusetshenziswa kwemikhiqizo ekhishini nasendlini yokugezela.
I-6) Ubumba be-luminescent bezithombe buyinto ebonakalayo eqinile, ukumelana nokushiswa kwemoto, ukubuyiselwa komlilo, ukumelana nokuguga futhi mahhala kusuka kuma-radioacaction uma kuqhathaniswa nezinye izinto ze-luminescent, ezenza ukuthi zisetshenziswe kabanzi ezindlini ezifuywayo nasezakhiweni zomphakathi.
Qamba i-tile enamakhaza ngaphandle kokudweba
Thayipha i-Wall Wall noma isikhathi somhlobiso we-floor ngaphandle kokudweba
Isayizi edumile engu-15x25, 30x30, 15x30,45x20cm njll. (Iyunithi cm)
Umbala okhanyayo Umbala owodwa noma uhlanganise umbala
Umbala wesikhathi sombala omhlophe ophuzi ngokuphuzi
Umbala okhanyayo ophuzi-oluhlaza okotshani noma ohlaza okwesibhakabhaka noma oluhlaza okwesibhakabhaka noma ohlaza okwesibhakabhaka
Ubukhulu bethayile 10mm ~ 13cm
Ubungqimba bokukhanya obukhanyayo 2mm - 3mm
Ukukhanyisa ngokusho kwe-DIN67510 Ingxenye 1
Ukupakisha: Ibhokisi legwebu lePolystyrene Ne-pallet
I-tile ekhanyayo enomdwebo yenzelwe amaklayenti ethu, yenzelwe umhlobiso odongeni, umhlobiso waphansi noma ikhiyubhu ekhethekile noma umhlobiso webha yobusuku njll.
I-Luminous Stair Nosing Character & imininingwane: 1, kukhanya ebumnyameni isikhathi esingaphezu kwamahora ayi-6, kungaba ngumhlahlandlela ukukhombisa indawo ephephile ngemuva kokucishwa kukagesi nge-elektroniki ngokuzumayo. I-2, Ukuvikela imiphetho yezinyathelo nezandla ezi-3, i-coudl ixazululwe ngezikulufo, amandla futhi kuqine kunokuba kunamathele kuphela. I-4, ukwelashwa okuhlukahlukene komhlaba kanye nemibala etholakalayo okukhethayo: Ingaphezulu le-Anodized ne-luster kanye ne-polishing noma i-sand-blasted surface njll. 5, umehluko we-Heigh Length futhi ngokusho kwe-amakhasimende Drawin ...